पत्रकार विश्व लिम्बू भन्छन्,मिरुनालाई दुव्र्यवहार हुँदा सँगै थिएँ तर भिडियो खिच्न सकिन (भिडियो हेर्नुस्) – Ramailo Sandesh
कबड्डी चार कि नायिका मिरुनालाई यैन दुर्व्यवहार हुँदा आफू सँगै भएको यद्यपि उनी रोएको र बौद्ध भिक्षुले माफी मागेको दृश्यलाई क्यामेरामा कैद गर्न नसकेको बताएका छन्।उनी भन्छन्,कतिपय अवस्थामा मलाई आफू पत्रकार भएतापनी क्यामेराले खिचिहाल्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन।करिअरमा पहिलो पटक उनले सफलताको सुःख पाएकी हुन् । डेब्यू फिल्म ‘लालपूर्जा’ यता उनी अभिनीत फिल्म सफल हुन सकेका थिएनन् ।पहिलो पटक आफ्नो फिल्मले बक्सअफिसमा रेकर्डतोड व्यापार गरेपछि उनी विभिन्न सिनेमा हलहरुमा पुगेर दर्शकसँग खुशी साटिरहेकी छन् ।
आइतवार उनी हल भ्रमणको क्रममा काठमाडौंस्थित सिभिल मलमा पुगेकी थिइन् । उनलाई देखेपछि सेल्फी खिच्ने दर्शकहरुको ठूलो भीड लाग्यो ।फ्यानहरुसँग सेल्फीमा रमाइरहेको बेला उनले अचानक आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै एक बौद्ध भिक्षु ( फुर्वा तामाङ ) माथि थप्पड बजारिन् ।
पछि ती व्यक्तिलाई उनले प्रहरीको जिम्मा लगाइन् । प्रहरी कार्यालय गएर किटानी जाहेरी समेत दिइन् । अहिले फुर्वा प्रहरी हिरासतमा छन् ।मिरुनाले बौद्ध भिक्षुमाथि हात उठाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि विभिन्नखाले प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । कसैले भिक्षुको नियत नै गलत रहेको बताएका छन् भने कतिले भिक्षुको दोष नभएको भन्दै मिरुनामाथि गालीगलौज गरेका छन् ।
मंगलवार चाबहिलस्थित केएल टावरको अगाडि बौद्ध भिक्षुहरुले मिरुनाविरुद्ध नाराबाजी गर्दै ‘कबड्डी ४’को पोस्टर समेत जलाए । अहिले त्यहाँको अवस्था तनावग्रस्त छ ।हलमा ‘कबड्डी ४’ प्रर्दशनमा नै रोक लगाइएको छ । केही सीसीटीभी फुटेज भन्दै बाहिर आएको भिडियोमा भिक्षुको कुनै दोष नरहेको देखाइएको छ ।
आखिर मिरुनामाथि वास्तवमा भएको के थियो ? उनीले हात नै उठाउनु पर्ने अवस्था कसरी सृजना भयो ?बौद्ध भिक्षुले गल्ती स्वीकार गर्दै माफी मागिसके पनि प्रहरीको जिम्मा लगाउने निर्णय मिरुनाले किन गरिन् ? हालै एक अन्तर्वार्तामा उनले आफूमाथि भएको ‘दुर्व्यवहार’को बारेमा बेलिविस्तार लगाएकी छन् । उनले भनेकी छन् ।त्यसबेला मलाई पछाडि कसैले छोएको महसुस भयो । म झस्किएँ र अलिकता अगाडि सरेँ । दोस्रो चोटी पनि यस्तै भयो । तेस्रो पटक चाहिँ मलाई कसैले ‘दुर्व्यवहार’ नै गरेको महसुस भएपछि मैले थप्पड हानेको हुँ ।
ती व्यक्तिलाई भिक्षुको भेषमा देखेपछि मलाई झनै रिस उठ्यो । किनकि, म पनि बुद्धिष्ट हो । हेर्दा मभन्दा उमेरले सानो लागेपछि सबैको अगाडि कराएँ पनि । त्यसबेला मैले कलाकारको रुपमा नभइ मानव भएको हिसाबले आफूमाथि भएको ‘दुर्व्यवहार’को प्रतिवाद गरेँ ।उसले मसँग माफी पनि माग्यो । मैले उसलाई छाड्न पनि खोजेको थिएँ । तर, पछि म आफैंलाई लाज लाग्यो । किनकि, त्यहाँ सबैले भिडियो रेकर्ड गर्नुभएको थियो । बाहिर निस्किएर म रोएँ पनि ।आफैंलाई कमजोर महसुस गरेँ । त्यो व्यक्ति हाँसीखुशी बाहिर रमाइरहेको देखेपछि मेरो चित्त बुझेन र मैले कानुनको सहायता लिनुपर्छ भन्ने लागेर प्रहरीको जिम्मा लगाएँ ।
अहिले मेरोबारेमा विभिन्न खाले टिका(टिप्पणी भइरहेका छन् । मेरो चरित्रमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । भिडियोमा सानो क्लिप्स हेरेको भरमा मलाई गालीगलौज गरिएको छ ।भिडियोमा मैले उहाँ भिक्षुलाई कराइरहेको मात्र देखिएको छ, त्यसैले ममाथि गालीगलौज भएको होला । मलाई थ्रेट पनि आएको छ ।
यो केश कानुनी रुपमा अगाडि बढोस् भन्दा पनि यो घटनाबाट उस (बौद्ध भिक्षु) ले लेसन सिकोस् भन्ने लाग्छ । यस्तो घटना कसैमाथि नदोहोरियोस् र उसले पनि भोलीका दिनमा यस्तो कसैलाई नगरोस् । भिडियोमा आधी कुरा मात्र हेरेर एकतर्फी धारणा बनाउनु राम्रो होइन ।जतिले पनि मलाई गाली गरिरहनुभएको छ, तपाईंहरुको दिदी–बहिनीलाई यस्तो भएको अवस्थामा आवाज उठाउनु पर्छ भनेर सिकाउनुहोला !कृपया यसै बिषयमा तयार पारिएको भिडियो सामाग्री तल दिइएको छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला